Ndị na -emepụta China na TG Circuit Breaker | Junwei
Junwei obere voltaji onye na-ere ihe dị iche iche na-emebi emebi na sekit, ọnụ ahịa na-acha anụnụ anụnụ 3-36 KVA:
-Gbuo ma bepụ ngwaọrụ niile
- Na -egbochi oke ibu na obere sekit.
-Anwere oke nha iji belata ike nke nkwekọrịta ERDF edebara aha
- Gbaa mbọ hụ na echedoro ndị ọrụ site na kọntaktị na -apụtachaghị ìhè ma gbochie ihe egwu ọkụ site na ilele ọkwa nkewapụ (ụdị dị iche)
- Nhọrọ dị iche iche na-enye ohere ịhọrọ ngwaọrụ dị iche iche dị n'okpuru ala 30 Ma (NF C 15-100) ma na-akwalite mgbochi maka nnyonye anya ikuku ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-akpata (ihe na-akpalite mberede)
Teknụzụ ngwaọrụ nchedo:
Onye na -emebi okirikiri ngalaba ERDF nwere ọtụtụ ọrụ nchekwa
- A na -enweta nchedo oke oke site na ndọta oleo nke “dash pot”.
Ahịrị dị ugbu a nke a ga -achịkwa na -aga site na eriri ndọta ndọta, a na -enweta oge mkpalite achọrọ (dabere na ike) site na ibugharị isi magnet n'ime tube nwere mmanụ nwere viscosity na -enweghị okpomọkụ.
-A na -ahụta nrụrụ ala nke dị ugbu a site na ihe mkpali dị iche iche dị ugbu a.
A na -achọpụta nsị mmiri nke ụwa site na mkpokọta vector nke oge a na nke na -anọpụ iche nke isi ikuku nke transformer mgbanaka ugbu a. Ihe mgbanaka mgbanaka nke abụọ na -enye ike maka ọsọ dị elu nke ndọta magnetik polarization.
N'ọdịiche dị iche iche, njem dị iche na -egbu oge na -egbu oge site na ịtinye kaadị njikọta netwọkụ RC nke nwere njikọ ike n'etiti mgbanaka mgbanaka abụọ na relay dị iche.
-Usoro ọrụ nke usoro njikwa bụ njem njem na -akwụghị ụgwọ nwere ọnọdụ mgbakwụnye abụọ kwụsiri ike nke akara m na o.
- Enwere ike ịhazigharị caliper infrared nke dị ugbu a site na ịkwaga ịghasa na -adịghị agbanwe agbanwe, nke enwere ike ịnweta na oghere caliper n'ihu. Ebe nchekwa a nwere naanị ọnụọgụ nke dabara na ntọala amperage ị họrọ.
Site na ịkachi ihe nrụzi ngọngọ, ị nwere ike gbanyụọ nnyonye anya na ntọala.
Enwere ike ịnwale otu ihe dị iche site na sekit nwere ike iji bọtịnụ na -aga n'ihu wee kpọọ ya "ule".
Nke gara aga: Fuuz
Osote: Motor Starter
Kemeghi Circuit emebi
Baco Circuit emebi
Ọdịiche Circuit emebi
French Circuit emebi
Pg Circuit emebi
Single -adọ Circuit emebi
Atọ adọ Circuit emebi
JVM10 Ụdị ọhụrụ dị ugbu a na -agbanwe agbanwe ...
Ngwa obere ihe nrụpụta sekit
JVM5 (EZC) Kpụrụ Circuit emebi
KK Akwampaefo Ewuradze Mframa, MCCB
Iji nye fuuz voltage dị ala